असार (९४) – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > प्रकाशन > २०७७ > असार (९४)
August 1, 2020 असार (९४)
उपन्यासकार राजेश आचार्य पिता रामचन्द्र आचार्य र माता वृन्दा आचार्यको कोखबाट जोरपाटी ३ किनिदोबाटोमा ९ मार्च १९८३ इ. संवत् मा जन्मिएका हुन् । दुई हजुर आमाहरू, दुई बहिनीहरूसहितको संयुक्त परिवारमा हुर्किएका राजेशRead More…
“आनन्द, सौन्दर्यबोध र हृदयशिक्षण काव्य कलाको प्रयोजन हो ।” यही प्रयोजनको आपूर्तिमा काव्य सर्जकहरू आफ्ना मनोभाव पाठकहरूमा समर्पित गरेर पुण्य कमाइरहेका हुन्छन् । “ब्रह्मले अनुभूत प्रस्फूटनको एक वाक्य नै काव्यका संरचनामा आबद्धRead More…
August 1, 2020 असार (९४), कथा
भूमिजङ्गका उमेश र दिनेश नामका दुई छोरा थिए । आठ वर्षको उमेरमा उमेश टाइफाइड रोगबाट ग्रसित भए । भूमिजङ्गले छोरालाई अस्पताल पु¥याए । उपचारपछि टाइफाइड त निको भयो । दुर्भाग्य उमेशका दुवैRead More…
“देवेन्द्र तेस्रो भएछ” –भर्खर रिजल्ट सुनेर आएको रामेले पसलमा आएर भन्यो । सबका कान ठाडा भए । “को देवेन्द्र भन्या, कसको छोरा” —रामदल बुढाले सोधे । “त्यै के त दोबाटे काइँलाको छोरा,Read More…
ऊ आउने बेला भएको थिएन । ऊ अवश्य आउने छ । म सुत्नुअधि । हुन त ऊ सहजै कहाँ आउँछ र ? ऊ आउन त पूर्व तयारी हुनुपर्छ, अत्यन्त चकमन्न रात हुनुपर्छRead More…
‘गुडमर्निङ’ सुमु ! तिमी अझै सुतिराखेका छौ ? “ओहो ! ढिला भैसक्यो ।” भन्दै म श्रीमान्लाई घचघच्याउँछु । अघि भर्खर नेपालबाट फोन आएको थियो । उहाँहरूको तीन बजेको उडान छ रे !Read More…
“लौन नि त्यो बुढीको पेट कत्रो ठूलो रैछ ! बच्चा पाउने छ कि क्याहो ?” एउटीले भनी । “नकराऊ, त्यस्ती बुढीले नि भुँडी बोक्छन् ? नचाहिने कुरा नगर” अर्कीले भनी । “नभएRead More…
नेपालमा केही प्रकाशकहरू छन् आइमाईको मात्र पुस्तक छाप्न मनपराउने । बढीमा विवाहित आइमाई जो हाँसखेल ठट्टा मजाक बेसी गर्छन् उनीहरूको किताब पनि प्राथमिकतामा पर्छन् । केही प्रकाशक छन् पाठ््य सामग्री मात्र छाप्नेRead More…
“ए प्रबाल ! हिँड घर छोडेर भागौँ ।” “किन र समाल घरबाट भागेर गए के हुन्छ ?” “हेर यहाँ हामीलाई बौले पिटेर हैरान पारेका छन् । नसक्ने काम पनि लाउँछन् खान समयमाRead More…
July 26, 2020 असार (९४)
केही समयअघि बेलायत अमेरिका १७ दिन घुम्ने साइत जु¥यो । आँखाभरि सपना र मनभरि उत्साह बोकेर म त्रिभुवन विमानस्थलतिर लागेँ । नेपालको सुरक्षा जाँच लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जहाजको ढोकामा पुग्दाRead More…